Kedu otu azụmahịa gị nwere ike isi rite uru site n'aka onye okike azụghachite azụ?
Ịmepụta backlinks dị mma bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi njikarịcha nchọgharị njikwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala mgbe ị na-eme ka njikarịcha na njedebe, ị ga-amara na ịmepụta backlinks na-edekọ ma rụọ ọrụ iji bulie gị na saịtị n'usoro, bụ mgbagwoju anya na nsogbu dị ukwuu. Nwelite Google ikpeazụ mere ka ọ dị oke mkpa iji chọpụta ihuenyo weebụ nke jikọtara gị na mkpa nke njikọ ndị ọzọ.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle nkọwa zuru ezu otú ụlọ ọrụ iwu gị nwere ike isi mee ka azụmazụ dị mma nke na-eweta nsonaazụ a na-ahụ anya n'ịzụ ahịa n'ịntanetị n'enweghị onye na-eji azụmazụ backlink akpaka - servidores dedicados baratos para.
Na-emepụta backlinks maka ebe nrụọrụ weebụ
Ntanetị ọzọ na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ gị, Google a tụkwasịrị obi na saịtị ahụ bụ, ma emesịa, ọkwa dị elu nye ya.
All weebụsaịtị that possess some value to users are typically rank linked by a considerable amount of resources and users and subsequently rank high on SERP. Mgbe ụdị weebụ dịka Wikipedia, Forbes ma ọ bụ CNN pụtara na nchịkọta ise mbụ maka nyocha gị, ịkwesighi iji oge dị ukwuu na-achọ ozi achọrọ. Site n'itinye weebụsaịtị ndị a dị elu ma nwee ikikere na ọnọdụ TOP, Google na-eme ka ahụmịhe ọrụ na usoro ọchụchọ.
Ụzọ omenala nke inweta ihe njikọ njikọ bụ site n'ichepụta ihe ọmụma na ọdịnaya ọdịnaya na ichere ka ọ gbasaa na weebụ. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ apụghị ichere ruo mgbe ha na-ejikọta njikọta ma na-ezo aka na ndị dị iche iche backlink creators.
Olee otú azụlink onye ọrụ na-arụ?
Azụlite azụlink automation na-emepụta backlinks na oke ọsọ na nkwa na njikọ ndị a sitere na isi mmalite ndị dị elu. Otú ọ dị, dị ka ekwuru m tupu ị nweta njikọ ndị dị n'èzí na-ewe oge na mgbalị. Ọ bụ ya mere okwu ha ji dị oke mma ịbụ eziokwu. N'ikpeazụ, onye okike backlink na-arụ ọrụ site n'inwe nchekwa data dị ukwuu nke weebụsaịtị ndị dị mfe iji biputere. N'ọtụtụ ọnọdụ, isi ndị a na-agụnye saịtị nke azụlị azụlink zutere n'oge na-adịbeghị anya. Ọzọkwa, bots nke a na-ejikarị njikọ njikọ software na-emepụta ihe na-akpaghị aka na blọọgụ na forums yana bipụtara posts na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche. Dị ka a na-achị, backlink creators tinye akwụkwọ gị na backlink na ọtụtụ ọnụọgụ saịtị ndị na-anaghị achọ nnyefe.
Uru mbu nke etinyebere na onye okike backlink bụ na o nwere ike iweta ihe ntanetị dị ọhụrụ na ibe mbụ nsonaazụ ọchụchọ site na mkpụrụokwu kpọmkwem n'ime obere oge.
Nsogbu ndị ị nwere ike ihu na iji onye na-eme ihe na backlink?
N'ihe omume, njikọta njikọta na-akpaghị aka dị iche site na njikọ njikọ anụ ụlọ ma na-enyo enyo maka engines ọchụchọ.
Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahịa iwu kpebisiri ike iji ndị na-eme ihe azụ azụ, ọ nwere ike ime ka ọ bụrụ aha ya. Dika ngwaọrụ ndị a na-akpaghị aka na-ebute nnukwu ederede nke enweghị mma ọdịnaya iji kwalite mkpokọta weebụsaịtị ma nweta ọtụtụ backlinks, ndị ọrụ ga-ejikọ ụlọ ọrụ iwu a na ụlọ ọrụ iwu gị.
Nsogbu ọzọ ị nwere ike ihu na iji ndị na-emepụta backlink creator bụ Google iwu nke na-aghọ ọbụna ihe siri ike mgbe ikpeazụ Penguin melite. Nhụramahụhụ ndị a nwere ike imebi mgbalị niile gị SEO ma mee ka deindexation weebụ.